Wikipedia:Mpandrindra/Fangatahana - Wikipedia
2 Fangatahana ho lasa Mpandrindra
2.1 BeGasy – Dinika
4.1.1 Jagwar – Dinika
Manohana. Na dia vao haingana aza ianao no nisoratra anarana teto amin'i Wikipedia, mino aho fa hitondra fiovana eto amin'i Wikipedia ianao. Ankoatra izany dia izaho irery ihany koa ny mpandrindra miteny malagasy eto, ka mahatsiaro ny filàna mpandrindra faharoa, indrindra rehefa amin'ny vanom-potoana tsy afaha-mandray anjara. — Jagwargrr... mailaka 25 Mey 2015 à 19:14 (UTC)
Jagwar – Dinika
Ity ny momba ahy voalohany indrindra, Izaho dia mpianatra malagasy mianatra eto Frantsa nandritry ny folo taona. Tonga teto amin'i Wikipedia izaho tamin'ny 2008 anefa tsy dia nahay nanoratra tamin'ny teny malagasy be loatra. Na dia izany aza dia niezaka aho hanoratra tsara ny teny malagasy. Roa taona taty aoriana, efa mahafehy eo ho eo ihany ny fanoratana amin'ny teny malagasy aho, ka nanomboka nampiasa mpikambana rôbô hanoratana lahatsoratra ary nampiasa izay rôbô izay any amin'i Wikibolana, tetikaan-drakibolana hafa azon'ny tsirairay andraisana anjara. Tsy nisy olona mpandray anjara mavitrika tany amin'ilay rakibolana ka lasa aho nampirimpirina ary nanisy votoatiny tany. Mba hahamora ny asa kojakoja, dia nomena ny zon'ny mpandrindra aho, ary nanomboka nandray anjara tamin'ny alalan'ny tanana aloha tamin'ny voalohany, dia aveo tamin'ny alalan'ny rôbô izay efa nanao fanovana mahery ny fito tapitrisa amin'izao fotoana anoratako izao.
Eto amin'i Wikipedia indray, dia tsy misy mpikambana mavitrika eto amin'ny Wikipedia amin'ny teny malagasy amin'izao fotoana, ka mangataka ho lasa mpandrindran'ity wikipedia ity izaho. Ny antony hangatahako ny zon'ny mpandrindra dia ny tenako manam-potoana hikarakara ity wiki ity, ary indrindra indrindra, manadio ny lahatsoratra ary ny votoatiny, izay ho vita tsaratsara kokoa raha manana ny fitaovan'ny mpandrindra. Ankoatran'ny "asa fikojakojana" ny wiki moa dia misy antony faharoa : efa ho roa taona mahery izay ny mpandrindra manana zo maharitra no tsy mandray anjara eto intsony; tsy fantatro izy ireo raha mbola tonga mijery eto, fa ny hitako dia izy ireo tsy mandray anjara eto amin'ity wiki ity intsony, na dia manitsy ny hadisoan-tsipelina aza. Heveriko arak'izany fa tsy manana mpandrindra intsony ny Wikipedia malagasy.
Na dia vitsy aza ny mpandray anjara, be dia be ny asa kojakoja tokony hatao, nohon'ny spam indrindra indrindra, ary koa noho ireo asa kojakoja ary ireo asa fanovana ny pejy voaaro (toa ny pejy fandraisana ary ny pejy misy ny endrika vangovango) sy ny asa fanakanana mpikambana mpanao spam. Efa efa-taona mahery koa izaho no mandray anjara eto, ary noho izany efa mahafehy tsara ny fitaovana Mediawiki ary efa mahalala tsara ny fepetra tokony hajaina eto amin'i Wikipedia.
Ary na dia kely aza ny fotoana ananako eto am-pelan-tanana, mbola manam-potoana hanaovana ny asa fandraisan'anjara ary ny asa kojakoja ihany izaho, ka afaka mampiasa ny fitaovan'ny mpandrindra araky ny hataky ny fikambanana.
— Jagwargrr... mailaka 6 Oktobra 2012 à 21:11 (UTC)
(Septambra 2010) Fahazoana zo tsy maharitra.
(6 Oktobra 2012) Fangatahana ny zo tsy maharitra any amin'i Meta.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Mpandrindra/Fangatahana&oldid=768867"
Voaova farany tamin'ny 25 Mey 2015 amin'ny 19:10 ity pejy ity.